प्रधानमन्त्रीको अगाडि ‘उपरखुट्टी’ लगाउने यी कूटनीतिज्ञ महिला को हुन् ? - Dainik Nepal
प्रधानमन्त्रीको अगाडि ‘उपरखुट्टी’ लगाउने यी कूटनीतिज्ञ महिला को हुन् ?
दैनिक नेपाल २०७३ चैत ६ गते ९:२५
काठमाडौं, ६ चैत । संयुक्त राष्ट्र सघंका कूटनीतिज्ञले कसरी आफ्नो व्यवहार र चालढाल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहामीले सिकाइ राख्नु पर्दैन । किन भने राष्ट्र संघमा आवद्ध व्यक्तिले राम्रो आचरण र शिक्षा राखेको हुन्छ भन्ने आममान्यता सबैतिर छ ।
तर, राष्ट्र संघको उच्च ओहदाको व्यक्तिले आफ्नो बसाइको आचरण र अनुशासन भुल्दा नेपालीको मन दुख्नु स्वभाविक हो । कुरा हो शुक्रबारको ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव सम्साद अख्तरले शिष्टाचार भेट गरिन् । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको इकोनोमिक एण्ड सोसल कमिसन फर एसिया एण्ड प्यासिफिकका कार्यकारी प्रमुखसमेत हुन् । तर, उनले आफ्नो मर्यादा भुलेर प्रधानमन्त्री दाहालको भेटमा जसरी प्रस्तुत भइन् उनको र राष्ट्र संघको गरिमालाई कम गराइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्साद अख्तरले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिदाइ भेट गरेकी थिइन् ।
भद्र र सालिन अवस्थामा सोफामा बसेका प्रधानमन्त्री दाहालसँगै अर्को सोफामा बसेकी सम्साद अख्तरले आफू कुन मुद्रा र अवस्थामा बसेको छु भन्ने कुरा भुलेर जगत हसाएकी हुन् ।
नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि सम्साद अख्तरले जसरी हेपाहप्रवृत्ति देखाएर ‘उपरखुट्टी’ लगाएर बसेकी छिन् त्यसले उनको आफ्नो अनुशासनलाई झल्कादिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको घुँडा छुने हो कि जस्तो गरेर ती महिलाले उपरखुट्टी लगाएकी छिन् । ती महिलाले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु भनेर भुलेको तस्बिरमा देख्न सकिन्छ ।
चाहे जे होस् कुनै पनि कूटनीतिज्ञले आफ्नो मर्यादा भुल्नु हुँदैन । उनीहरूले कुन अवस्था र कुन पदको व्यक्तिसँग भेटदैछन् र कसरी बस्नु पर्छ भन्ने कुरा सिक्नु पर्छ । होइन भने नेपाल र नेपाली हो भनेर हेप्ने यस्ता प्रवृत्ति कसैलाई मान्य हुँदैन । यस्ता कूटनीतिज्ञलाई आगामी दिनमा कस्तो व्यवहार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ ।